Home Somali News Wasiirka Duulista oo ka Hadlay Dhismaha Madaarka Hargeysa iyo Laydhka Duulimaadka Habeenkii
“Waxaan soo indho-indheeyey shaqada suurtogelinaysay laydhka duulimaadyada habeenimo ee garoonka (Landing lighting System) oo la bilaabay”
Wasiirka Duulista Hawadda iyo Gaadiidka Cirka Jamhuuriyadda Somaliland Md. Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa ka xog-waramay kormeer uu ku sameeyey dhismayaal iyo mashaariic ka socda madaarka caalamiga ah ee Cigaal ee Hargeysa.
Md. Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa qoraal uu soo saaray shalay ku sheegay si dhakhso ah loo dhammaystiri doono qaybta lagu kordhiyey dhabbaha madaarka iyo sidoo kale samaynta laydh suurtogeliya in diyaaraduhu habeenkii isticmaali karaan garoonka Hargeysa.
“Waxa aan kormeer shaqo ku gaalaabixiyey garoonka caalamiga ah ee Cigaal oo ay ka socdaan mashaariic badan oo kala duwan, waxaanan si gaar ah ugu kuurgalay dhabbaha dayuuradaha cusub ee lagu kordhinayo tii hore oo haatan Ilaahay mahadii uu dhammaaday lakabkii koowaad ee 6cm ahaa (DBM) ee daamurka ahaa oo dhan 1,250 mitir.
Insha Allaah ku tallo galkayagu waa in aannu dhammays tirno lakabka labaad ee hadhay laba toddobaad gudahood. Xilligii aan kormeerka ku jiray waxaan la kulmay khuburadii Mashruuca Ilaalinaysay oo gudanaya shaqo-maalmeedkoodii caadiga ahaa ee ay ku hubinayeen tayadda iyo toosnaanta shaqada socota.
Dhammays tirka korodhsiimadan waxay ka dhigaysaa dhabbaha diyaaradaha ee madaarka Hargeysa mid dhererkiisu yahay 3700 mitir, sidoo kalena waxaannu kordhin doonaa qaybta barxadda diyaaradaha la dhigo (parking) iyo taxi-way labaad oo la samayn doono.
Dhinaca kale, waxaan soo indho-indheeyey shaqada suurtogelinaysay laydhka duulimaadyada habeenimo ee garoonka (Landing lighting System) oo la bilaabay. Mashuurcan waxa maalgalinaysa Xukuumadda Somaliland, waxaannu u dhammaystirmi doonaa si dhakhso ah haddii Ilaahay yidhaah,” ayuu yidhi Wasiirka Duulista Somaliland.